“Wenger waa mid ka mid ah macalimiinta ugu fiican taariikhda” – Mourinho – Gool FM
“Wenger waa mid ka mid ah macalimiinta ugu fiican taariikhda” – Mourinho
(Yurub) 20 Feb 2019. Jose Mourinho ayaa ku tilmaamay tababarihii hore kooxda Arsenal ee Arsene Wenger inuu yahay mid ka mid ah macalimiinta ugu fiican taariikhda kubada cagta aduunka.
Shabakada caanka ah ee “Sky Sports” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho wuxuuna yiri:
“Waxaa jira dhacdooyin qaarkood oo wadada iskula jira, waxaan kaliya ka hadli karaa naftayda, laakiin runtii waan ku riyaaqay tartankiisa, waxaan u hayaa ixtiraam dhab ah”.
“Arsene Wenger wuxuu taariikh badan ka sameeyay kooxdan, waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican taariikhda kubada cagta”.
Yeelkadeed kulamadii ay isaga hor yimaadeen Mourinho ee Wenger ayaa had iyo jeer lagu dhex arki jiray dagaalka labada macalin, iyo hadalo kulkulul ay isdhaafsan jireen kahor iyo kadiba kulamada, waxayna ahayd dhacdo ay xili kasta sugayeen jamaahiirta.
Waxaa xusid mudan in labadan macalin ee Jose Mourinho iyo Arsene Wenger ayaa haatan shaqi la’aan yihiin, kadib markii uu Wenger ka dhaqaaqay Gunners xili ciyaareedkii hore, halka Mourinho uu laga ceyriyay shaqada kooxda Manchester United bishii December ee lasoo dhaafay.
“Wey adag tahay in la isbar-bardhigo macalimiinta Guardiola iyo Zidane” - Danilo